07:15:28 am 25-May-2022
दीपिका पादुकोणको पहिलो ओटीटी फिल्म ‘गेहराइ’ को ट्रेलर सार्वजनिक
दीपिका पादुकोणको पहिलो ओटीटी फिल्म ‘गेहराइ’ को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । फिल्ममा दीपिकाको अलावा सिद्धान्त चतुर्वेदी , अनन्या पाण्डे र धैर्य करवा पनि मुख्य भूमिकामा रहेका छन् । फिल्मको ट्रेलर बलियो छ । ट्रेलरमा दीपिका पादुकोण र सिद्धान्त चतुर्वेदीको बीचमा धेरै रोमान्टिक दृश्यहरू पनि देखाइएको छ।
चलचित्रको ट्रेलरमा के छ?
दीपिकाले घरमा बस्न मन लाग्दैन भन्दै ट्रेलरको सुरुवात हुन्छ । म यहाँ फसेको महसुस गर्छु। यसपछि आफ्नै बहिनीको प्रेमीसँग अफेयरको कथा छ ।फिल्म ‘गेहराइ’को कथा जटिल आधुनिक सम्बन्धको कथा बोकेको रिलेशनशिप ड्रामा हो । यस फिल्ममा दीपिकाले धेरै बोल्ड सिन पनि दिएकी छिन् ।
चलचित्रको विषयवस्तु के हो ?
दीपिका र सिद्धान्त चतुर्वेदी बहुप्रतिक्षित फिल्मले आजको सम्बन्धको जटिलता र भित्री तहहरू, युवाहरूको जीवनका विशेष पक्षहरू र स्वतन्त्र रूपमा बाँच्ने इच्छालाई समेटेको छ। ट्रेलरमा देखाइएको छ कि हामी कसरी भावना र भावनाहरूको चक्रब्युहबाट जान्छौं।
फिल्म अर्को महिना रिलिज हुँदैछ
शकुन बत्रा द्वारा निर्देशित, यो फिल्म ११ फेब्रुअरी २०२२ मा OTT प्लेटफर्म AMAZON प्राइम भिडियो मा रिलीज हुनेछ। फिल्म ‘गेहराइ’ मा नसिरुद्दीन शाह र रजत कपूरले पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । फिल्मलाई धर्मा प्रोडक्सन, भायाकम १८ र शकुन बत्राको जास्का फिल्म्सले निर्माण गरेको हो ।